Kedu ihe ị ga-esi na Nepal?
Nepal bụ otu n'ime obodo kachasị egbuke egbuke na nke kachasị na Eshia. Ọ bụ mba nke ọdịiche na ọdịiche pụrụ iche, nke a na-apụghị ịghọta nanị site na onye maara mmekọrịta nke ndụ Nepal. Mgbe ị na-aga n'okporo ámá Kathmandu na obodo ndị ọzọ, willy-nilly ị na-eche banyere ịzụta onyinye na ihe ncheta. Gburugburu gburugburu ebe obibi ndị ahịa, ụlọ ahịa, ahịa na ụlọ ahịa na-emetụta ikuku gburugburu.
Ihe ncheta si Nepal
Na Nepal, a na-arụpụta ihe dị mkpa na ụdị nkà ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ihe ndị dị otú ahụ, nke na-enweghị ebe ọ bụla, ma e wezụga maka Nepal, ị gaghị achọta ya. A na-enwe ekele mgbe nile maka ọrụ edozi aka, n'ihi na ọ bụghị nanị ọrụ siri ike, kama inye onyinye mkpụrụ obi. Ya mere, gịnị ka ị ga - esi na Nepal:
Tii. Ọ dịghị dị ka onye ị gbalịrị tupu. Nke a bụ ngwakọta na-egbukepụ egbukepụ nke flavors na flavors. Na Nepali tii kacha mma ịṅụ na mgbede, n'ihi na ị ghọta ihe ọ na-atọ ụtọ, ị ga-ezuru ike ma nwee mmanya dị oké ọnụ ahịa. Site n'uzo, obi uto a adighi ego, nke kachasi mkpa, a na-azoputa tii na Nepal n'ebe nile: dika n'ulo oriri obula, na n'okporo ámá ya na onye na-ere ahịa. Gbalịa na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na unrivaled uto!
Teapots. Na ime tii, echefula ịzụta teapot. Nhọrọ ha choro bụ nnukwu. A na-eji aka eme ihe ọ bụla ma jiri ya rụọ nkume, ígwè, enamel. Ịnwekwara ike ịzụta teepu iko, site na mgbidi nke i nwere ike ịhụ anwansi nile nke oghere epupụta epupụta. Nke a bụ nhọrọ dị ebube nke ncheta si Nepal.
Pashmina. Ọtụtụ ndị njem nleta na-amaghị nke ọma, ma nke a bụ ihe dị nro, nke dị nro ma dị ọkụ nke nwere aha cashmere. A na - enweta ya site n'ikike kasị mma nke ewu ewu Himalaya. Pashmina anaghị etinye ụdị ajị ọ bụla ọzọ. Nke a bụ onyinye 100% nke sitere na Nepal n'ụdị ụfụfụ, shawl, akwa, akwa ma ọ bụ ncha.
Ihe ịchọ mma. Imirikiti njem nleta, na-ekpebi ihe ị ga-esi na Nepal bịa dịka onyinye, kwụsịrị ịhọrọ ngwaahịa site na ọlaedo na ọlaọcha. Ọbụna ọtụtụ ndị na-aga ebe ahụ maka ha, àgwà dị mma na ụgwọ ezi uche dị na ya. Ị ga - enwe nnukwu nhọrọ nke yiri mgbaaka, ọla aka, pendants na nkume dị oké ọnụ na iko dị mfe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dịpụrụiche, ịnwere ike ịme otu onye. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike isonyere usoro okike ma mepụta ihe ịchọ mma pụrụ iche.
Ihe niile maka ime. Na ahịa Nepalese na na ụlọ ahịa ị nwere ike ịzụta ọtụtụ ngwa nke ga-eme ka ị gbanwee ime ụlọ, ụlọ ma ọ bụ ụlọ ahịa:
ụdị ihe oyiyi na ihe oyiyi dị iche iche, ndị e ji osisi rụọ ma ọ bụ ígwè;
eserese tankị ma ọ bụ, dịka a na-akpọkwa ha, sphabha bụ ihe osise a na-eme na owu ma ọ bụ silk na-ese ya na agba agba;
faience na ceramic tableware nwere ike ịghọ amara pụrụ iche nke kichin gị;
ọnụ ụzọ na-adị n'ụdị okooko osisi lotus, ụmụ anụmanụ ma ọ bụ aka aka - esite na Nepal nweta ha;
ejiji abụ onyinye zuru oke maka enyi yoga na ọ bụghị naanị. N'okpuru ụda ya, ị nwere ike zuru ike ma tụgharịa uche. Ụda ahụ dị ịtụnanya;
ndị na-agba ọsọ na ndị na-agba ọsọ, na-agba ọsọ na nchebe ga-echebe ọ bụghị nanị ụlọ gị ma onwe gị "anya ọjọọ", ma ọ bụrụ na ị kwenyere na ike ha.
Ugbu a, ị maara na ọ bụghị naanị ndị Himalaya ka a ma ama maka Nepal. A pụkwara ịkpọ Kathmandu isi obodo nke ihe ncheta na ịzụ ahịa ndị dị ọnụ ala, euphoric ịzụ ahịa na ihe ndị a na-apụghị ichefu echefu. Echefukwala naanị isi iwu nke ndị njem nleta - ịzụ ahịa na ọzọ ahịa.
Alakụba nke Indonesia
Nbanye na Singapore
Mmiri Cambodia na oké osimiri
Ndị isi ala nke South Korea
Ememe na Malaysia
Kedu ka ụbọchị si eto?
Mkpụrụ osisi nke polyurethane n'ime ime
Coralstone - Njirimara kpakpando
Serena Williams na nwatakịrị nwanyị dị ọnwa 4 pụtara na mkpuchi nke egwu
Rinse akpịrị na hydrogen peroxide
Esi ofe na ham
Kedu esi eweghachi di ya n'ulo?
Duputa mgbidi na ulo
Onye na-eme ihe nkiri Chris Hemsworth kwetara na ya nwere ekele maka Kristen Stewart
Barista Streisand, onye na-eme ihe nkiri, "dị ndụ" ya bụ Samantha ọ hụrụ n'anya
E jidere Lady Gaga na Bradley Cooper n'azụ n'azụ
Kedu calorie ole ka na-acha akwụkwọ ndụ tii?
Karịa iji mechie isi?